Mysms waxay u timaadaa Android si loo badbaadiyo kuwa wali isticmaalaya SMS | Androidsis
Mysms waxay u timaadaa Android si loo badbaadiyo kuwa wali isticmaala SMS
Halkan waxaa ku yaal codsi qof walba hubaal jeclaan doono, iyadoon loo eegin da'da, jinsiga, waddanka uu deggan yahay, iwm. Ku saabsan yahay mysms, oo hadda ku soo degay dunida Android oo noo oggolaaneysa inaan sms u dirno qaab dhaqaale iyo raaxo leh meel kasta oo adduunka ah iyo meel kasta. Dad aad iyo aad u tiro badan ayaa qandaraas ku qaadanaya sicirka xogta, sidaa darteed mustaqbalka qaabkan loo diro macluumaadka ayaa laga yaabaa inuu baaba'o. Halkaad halkaan ku haysato Mysms.
Adiga ayaa go’aaminaya haddii sms ku dir sms € 0,08 isla gudaha ama € 0,10 dibedda, oo aad la wadaagto hawl wadeenkaaga (iyadoo loo eegayo qiimaha qandaraaskaaga) ama labada hababba (oo leh mysms farriimaha dibedda iyo bixiyaha farriimaha gudaha).
Markay soo diraan sms-ka waxay go aansan karaan inay saxeexaan iyo in kale, taas oo macnaheedu yahay yeelashada 30 xaraf oo dheeraad ah Waxay sidoo kale u diri karaan sms kooxaha dadka mahadi ah ajandaha. Kadib waxay dooran karaan sida loo arko sms, ama qaabka caadiga ah ama qaabka xumbada. Halka markii ay ka helaan sms-ka mysms-ka soo baxa shaashadda ay toos uga akhrin karaan shaashadda.
Si kor loogu qaado amaahda, la-hawlgalayaal shahaado haysta ayaa la adeegsadaa kuwaas oo dammaanad qaadaya amniga iyo hufnaanta macluumaadka.
Waad rakibi kartaa arjiga mahadnaqa lambarka QR ee aan ka tagno hoosta ama kan Suuqa Android. Sikastaba websaydhka waxay ku leeyihiin dhammaan tilmaamaha ku qoran Isbaanishka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » Mysms waxay u timaadaa Android si loo badbaadiyo kuwa wali isticmaala SMS
Websmsyada wadajirka ah iyo jeeriga ayaa seddex jeer ka jaban. Markaa codsigaasi waa mid duugoobay.
Ma aanan ogeyn websms-ka, laakiin hadda waan soo galay waana dinaar ka qaalisan, sms cherry waa ka raqiisan yahay laakiin ma laha barnaamij loogu talagalay Android. Ma aqaano sababta aad u leedahay in dalabku uu duugoobay, runti
WebSms waxay leedahay isku xiraha sms cherry. Aan kuu sharaxo, waxaad soo degsataa shabakadaha, iyo websms isku xirka cherry ama wax la mid ah. Waxaad lacag ugu shubi doontaa sms Cherry waxaadna sameysaneysaa koontada barnaamijka websms-ka, kaas oo aad ugu dirto farriimaha. Iyo qiimaha, maxaa yeelay waxay kuxirantahay inta ay le'eg tahay xirmada aad dib u soo celineyso. Haddii aad dhigto 10 euro, farriimaha bilaa dir ah (CHERRY SMS waxay u muuqataa qaataha) waxay ku kacayaan 1 deyn, waxay ku soo baxayaan 3cts / sms, iyo haddii aad rabto lambarkaagu inuu ka muuqdo 6cts, oo tan Spain iyo dibaddaba. Dibna looma dhigo, farriimaha ayaa isla markiiba yimaada.
Maaddaama aan haysto, sida aad qiyaasi karto, kama sii diro sms-ka hawl wadeenkayga
Ku jawaab Himar2r
Xaqiiqdii, isku darka WebSMS + Cherry SMS Isku xiraha ayaa ah xalka ugu dhaqaale ee hadda loo heli karo SMS. Waa faa'iidada in WebSMS ay tahay codsi bixiyeyaal badan, in isku xirayaasha cusub la abuuri karo haddii hal nidaam uu ka fiicnaado mid kale, ama ka jaban yahay (hadda waxaa jira in ka badan 10 isku xirayaal kala duwan, in kasta oo adeeg bixiyaha ugu jaban uu weli yahay WebSMS, sidaas darteedna ay u yar tahay Isbaanish). Waxaan isticmaalayay dhowr bilood waligoodna wax dhibaato iima siin, SMS-ka marwalba wuu yimaadaa iyo goobta.
Iyo kuwa aan ku kalsoonayn WebSMS, barnaamijkooda gaarka ah ee loogu talagalay iPhone-ka si ballaaran ayaa loo soo dejiyaa, waxay kaloo leedahay codsi qaab java moobiil ah, daaqadaha, iyo inay si toos ah sms uga dirto degelkeeda. Oo iyagu waxay diyaarinayaan nooca barnaamijka ee loogu talagalay Android, in kasta oo horumarku ka hooseeyo kii caadiga ahaa maaddaama ayan ahayn kuwo aad u degdeg ah xaqiiqda ah inay taageerto WebSMS.
WEBSMS waa aaladda kaliya, kaligeed kaligeed ma diri kartid sms, waxaad kala soo bixi kartaa sheyga cherrysms-ka suuqa android, waxaad sameysaneysaa koonto waxaadna xareysaa 5eur tusaale ahaan waxayna ku siinayaan 160sms ... markaa si fiican u fiiri suuqa. 1. ka jooji websms-ka 2. ka-reeb-bixinta cherrysms-ka 3. samee koontada cherrysms-ka oo geliso dheji 4. geli koontada cherry iyo lambarka sirta ah ee shabakadaha
Haye, n2maager SMS wuxuu ku siinayaa boqol laab. Waxaad ku diri kartaa SMS-ka 6.5 senti euro (20% ka raqiisan tan), Isticmaal albaabbada fariimaha ugu fiican maxaa yeelay SMS-ku wuxuu yimaadaa xilligan oo had iyo jeer LAGU QAADO ADIGA OO AAN LAHAYN IN LAGU DARO SAXIIXYADO SOO SAARAN. Waxaan u isticmaali jiray 3 bilood wayna fiicantahay. Oran ayaa igu soo rogtay 18 senti VAT juasss. Waad ku mahadsan tahay ANDROID furitaanka indhahayga !!! Waxaan ku iri, iskuday n2manager SMS ka dibna ii sheeg 😉
waad ku mahadsantahay tallada, waanu isku dayi doonaa 🙂
Pepe Pepe dijo
Iyo sidee WhatsApp u tahay Android ???
Miyay u qalantaa inaad u isticmaasho qof kale oo isku barnaamij ah laakiin ku jira iPhone, tusaale ahaan?
Jawaab Pepe Pepe Pepe
Mar labaad wanaagsan,
Xaqiiqdii, waxa aan ugu jeclahay n2manager SMS
(marka laga reebo keydinta lacagta ku jirta SMS) ayaa ah inay sidoo kale tahay codsi aad u wanaagsan oo fariin ahaan ugu yimid si caadi ah. Maaddaama ay tahay arrin xiiso leh, waa in la ogaadaa in ay isticmaasho batteri aad uga yar kuwa kale (waxay socotaa oo keliya markaan rabno, ma aha sida kuwa kale ee deggan maalintii oo dhan waxayna nuugaan baytariga wanaagsan)
Haa waad awoodaa, waa iskutallaab
Haa, waa u qalantaa, taasi waa, waxaad SMS uga diri kartaa WhatsApp wax kasta oo Android ah oo barnaamijkan u isticmaali kara iPhone, xitaa Blackberry. Soo koobid, waxaa loo diri karaa mvl kasta oo laga yaabo inuu ku rakiban yahay codsigan. Codsigan aad ayuu u wanaagsan yahay haddii aad leedahay qaddar xog oo fidsan.
WhatsApp wuxuu la shaqeeyaa oo keliya dadka leh WhatsApp. Xaaladdayda waxaa jooga 15 qof. laakiin waa mogollon qabow. 😉
Pepe 2004 dijo
Aan aragno maxaad ka hadlaysaa?
U dir SMS Spain 8 senti?
Waxaan durba ku haystay qiimahaas Yoigo… ..
MAXAA XIISO LEH?
Fursad, Android-kaaga ayaa kuu helaya kuuboonada qiimo dhimista adiga